Flute ကိုထုတ်လုပ်ရန် Chrome Plated Corrugating Roll China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:လူပျို Facer များအတွက်မြှင့်စက်ကြိတ်စက်,Chrome Corrugating Roll,စူပါ Wearable မြှောင်းပုံ Roller
Home > ထုတ်ကုန်များ > Corrugating Rolls > Flute ကိုထုတ်လုပ်ရန် Chrome Plated Corrugating Roll
Flute ကိုထုတ်လုပ်ရန် Chrome Plated Corrugating Roll
Chrome Plated Corrugating Roll သည်အဓိကအားအလယ်အလတ်မြန်နှုန်း Single Facer နှင့် manual Corrugation plants အတွက်သင့်တော်သည်။
အရည်အသွေးနှင့်စီးပွါးရေးထိရောက်မှုကိုတိုင်းတာရန်အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်းဖြစ်သောရေပွန်းကန်ခြင်းနှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းသည် Corrugated Cardboard Machine Lines ၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး Corrugated Cardboard ထုတ်လုပ်သူ၏စီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ကိုတိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးသည်။
Chrome Plated Corrugating Roller အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် -
♦ Corrugating Rolls ပစ္စည်း - စိတ်ကြိုက်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်။ သို့သော်အများဆုံးအသုံးပြုသော 48 နှင့် 50 Cr Mo Alloy သံမဏိအတုများ။
♦ Excellent ကဖြန့်ချိ Properties ကို။
ပင်လယ်အားဖြင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်း: Non-Fuligation သစ်သားသေတ္တာကိုသုံးပါ။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်များအတွက်အဆင်ပြေချောမွေ့ပြီးလုံခြုံစိတ်ချရသောကြောင့်သုံးစွဲသူများအတွက်အချိန်ပိုသက်သာစေသည်။
HUATAO GROUP သည်အခြားကား Corrugatted ကတ်ထူစက်အပိုပစ္စည်းများနှင့် Carton စက်အပိုပစ္စည်းများကိုလည်းထောက်ပံ့နိုင်သည်။ ကြိုက်တယ်
၁။ Corrugator Belt / Corruggator Belt
Slitter ဖြတ်တောက်ခြင်း Blade / ပါးလွှာသော Blade / Sliting Cutting Blade
4. ကြိတ်ဘီး / CBN ကျောက်ခေတ် / ကြိတ်ကျောက်
5. ရေမှုန်ရေမွှား Humidifier / ရေမှုန်ရေမွှားစိုထိုင်းဆစနစ် / ရေမြူရေမှုန်ရေမွှား
၆။ Corrugating Roll / Corrugated Roll / Corrugated Cardboard Roll /
၇။ ကော်ကော် / ကော်ကော်ရောဂါ
၈။ ဖိအားတွန်းစက် / ကတ်ထူပြားပုံနှိပ်စက်
Die Cut စက်ဝိုင်းပုံသေထောင့်အဖုံး Mat / Anvil Cover Mat
Flexo Rotary Die Cut ပေဖုံးအဖုံး / ရော်ဘာ ပေ Slotter Rotary အပေါ်စောင် Die-Cutter
11. အလိုအလျောက် Splicer
အခြားမော်တော်ယာဉ် Corrugatted Board ထုတ်လုပ်သည့်လိုင်းအပိုပစ္စည်းများ
မည်သည့်အကျိုးစီးပွားလျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမ်းရေးမှကြိုဆိုပါတယ်။ HUATAO ကမင်းကိုအမြဲစောင့်နေလိမ့်မယ်။
48CrMo 50 CrMo Tungsten Carbide Corrugated Roller အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Chrome Plated သို့မဟုတ် Tungsten Carbide Corrugated Roll အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Chrome သွပ်ကြိတ်စက် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လူပျို facer A / B / C / D / E Flute သည်သွပ်သွင်းစက် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လူပျို Facer များအတွက်မြှင့်စက်ကြိတ်စက် Chrome Corrugating Roll စူပါ Wearable မြှောင်းပုံ Roller ဆလင်ဒါမှိုများအတွက်ထောင့်ဖြတ်အဖုံး ကဒ်ထူပြားလိုင်းအတွက်ဖိအားကြိတ်စက် လူပျို Facer ဖိအားကြိတ်စက် စက္ကူစက်များအတွက်ရင်သားအလိပ် ဆလင်ဒါမှိုများအတွက်ထိပ်တန်းဝါယာကြိုး